လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 109
Shwe Nya War Sayadaw – Dhamma Talk, Portland & LA
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တရားပွဲများ အချိန်နှင့် နေရာထုတ်ပြန် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၅ နှင့် ၆ တွင် အော်ရီဂွန်၊ ဓမ္မ၀ိဟာရသာသနရိပ်သာ၊ ပို့လန်းတွင်၎င်း အောက်တိုဘာ ၁၃ နှင့် ၁၄၊ အယ်လ်အေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ လပွန်တေးတွင်၎င်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။ No tags for this post.
ဟင်္သတာမြို့က ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဒုက္ခ ပြည်သူတဦး (မိုးမခပေးစာ)။ အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၂ အာက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးထားလုပ်ရမယ့် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မှတ်ပုံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတွေဘက်မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအား အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေသည့်အတွက် နယ်ဝေးမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ရသောသူများအနေနဲ့ ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ ထို့ပြင် ပြီးစီးရ မည့်ရက်ကလည်းနီးလာပြီး မှတ်ပုံမတင်ရသေးသည့်ဆိုင်ကယ်များ အများအပြားရှိသလို ယခင် ကညနဦးစီးနှင့် အခွန်ဦးစီး မတည့်သည့် အတွက် ပြဿနာတွေလည်း ခဏ ခဏ ကြုံရပါတယ်။ ယခုအခါ သူတို့မတည့်သည့်အတွက် ငွေသွင်းသည့်နေရာတွင် ကြန့်ကြာနေရပြီး တတ်နိုင်သူများ၊ စိတ်ညစ်မခံနိုင်သူများက ပွဲစားများနှင့်သာ လုပ်ကြပါတော့တယ်။ ထိုသို့ပွဲစားနှင့်လုပ်ကိုင်ရခြင်းမှာလည်း လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လုပ်ကိုင်သူများအနေနဲ့ မည်မျှပင်စောစီးစွာရောက်စေကာမူ ပွဲစားနှင့် လုပ် ကိုင်သူများသာ ဦးစွာရရှိပြီး ဆိုင်ကယ်နံပါတ်များကိုလည်း နံပါတ်စဉ်အလိုက်မဟုတ်ပဲ ခေါ်ချင်သလိုခေါ်နေပါတယ်။ ထို့ပြင် ပွဲစားဆိုများမှာ အနည်းဆုံး...
မြ၀တီသား အောက်တိုဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အတွင်း ဘာအံဂိတ်တွေမှာ လိုင်စင်မဲ့ကားများဖမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကား ( ၁၇) စီးကျော်ရှိတယ်။ ဒီလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အခုလိုဖမ်းဆီးရတာကတော့ လိုင်စင်မဲ့ကားစီးလာပြီး ဂိတ်ကတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေကို မ ချေမငံပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပြီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို စတင်ဖမ်းဆီးနေပြီဖြစ်ပြီး ကောကရိတ်နှင့် မြ၀တီတို့တွင်လည်း စစ်ဆေးမှုများ မကြာမှီပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။ ဖမ်းဆီးရရှိသည့်ကားများကို လိုင်စင်ပြုလုပ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ (အတိအကျတော့ မသိရသေးပါဘူး) ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေကို ကားလိုင်စင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးဖြစ်လို့ နောက်ကို ငြိမ်းအဖွဲ့အမည်နဲ့ ကားတွေစီးလို့ ရ မရကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ ငြိမ်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲက တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပြပါတယ်။ မြ၀တီ၊ ကော့ကရိတ်နဲ့ ဘားအံ-မော်လမြိုင်မြို့တွေက လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ပေါင်းကြည့်ရင် အစီးရေ သောင်ကျော်ရှိ၏တယ်လို့လည်း...
ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အယ်လ်အေတွင် မျက်စိကုသပြီး တရားသင်တန်းများ ဆက်၊ ရှေ့လ မြန်မာပြည် ပြန်မည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရရှိသော တရားသင်တန်းဖိတ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ No tags for this post.
တန်ဖိုး အချိန်နှင့် သိနားလည် လက်ခံမှု ၀င်းညွန့်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာမိသားစု များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဒီစာကိုရေးမိပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို တွေ့ချင်၊ မြင်ချင်၊ အားပေးချင်သူများ၊ လေးစားတန်ဘိုးထားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုလိုသူများ များစွာရှိသလို သွားချင်ပေမဲ့ မသွားနိုင်တဲ့သူများလည်း များစွာရှိမှာပါ။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးအပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကြတော့ သွားဖို့စိတ်ကူးမရှိတာ၊ သွားဖြစ်ရင်လည်းသွားမယ်၊ မသွားဖြစ်ရင်လည်း မသွားဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေ ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာလေးဖတ်ပြီး စဉ်းစားစရာလေးရကြပါစေဆိုတဲ့ မေတ္တာစိတ် နဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆော်လုပ်လိုက်ပါရစေ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လောဘသားတွေပါ Black Friday လိုမျိုး အကျိုးအမြတ် တခုခုရမယ်ဆိုရင် ဒီပွဲကို သူ့ထက်ငါ အရင်ရောက်အောင်...
SUU – SF with Burmese Community Event Tickets Distribution Updates as of 27th September 2012 for SUU-SF Event ဧည့်လက်မှတ်များ ဖြန့်ချိမှု အခြေအနေ တင်ပြချက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ အချိန် 22nd September – we received 3600 tickets and 200 over-flow tickets from USF. စက်တင်ဘာ ၂၂ မှာ USF ကျောင်းက လက်မှတ် ၃၆၀၀ နဲ့ အရန်ခန်းမ လက်မှတ် ၂၀၀ လက်ခံရရှိပါတယ်။ 23rd September – we...
25th September 2012 Immediate Release from Guest Relation Team Dear All မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား The Event host, USF delivered total of 3600 tickets to us on 22nd September 2012 in the afternoon. ကျနော်တို့၏ ခန်းမပိုင်ရှင် USF ကျောင်းက ထုတ်ဝေသော လက်မှတ်ပေါင်း ၃၆၀၀ ကို စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ညနေခင်းတွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ We have not wasted time packaging our admission tickets for distribution according to...
Page 109 of 128«1...107108109110111...128»